धन माग्दै लक्ष्मीपूजा गर्नुभयो होला ? तर साच्चिकै धनि बन्नचाहि यसो गर्नुहोस । | Success Open University
By sopenu | October 20, 2017
आज लक्ष्मी पूजा अर्थात धनकि देवी लक्ष्मीमातालाई खुसि बनाएर जीवनमा धन, दौलत, सुन, चाँदि र लत्ता कपडाले भरिपूर्ण होस भनेर पुकारा गर्ने दिन । बास्तवमा लक्ष्मीपूजाको धार्मिक महत्व आफ्नै ठाउँमा छ साथै यसको सांकेतिक महत्व पनि कम छैन । आजको दिन आफुसँग भएको धनलाई लक्ष्मीमाताको प्रसादको रुपमा उच्च सम्मान र आराधना गरेर पुज्ने चलन छ, र साथै धनकी देवी लक्ष्मीमातालाई सधै धन, दौलतले भरिपूर्ण होस भनेर भक्तिभावले प्राथना गरिन्छ । यसको मतलव धनलाई संचय, सम्मान र सहि तरिकाले उपयोग गर्नु पर्छ भन्ने हुन्छ ।
यो त भयो लक्ष्मीपूजाको अर्थ, महत्व र धार्मिक तथा सांस्कृतिकरुपमा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा । तर अहिलेको भौतिकवादी युगमा साच्चीकै धन कमाउन चाहि के गर्नु पर्छ त ? आउनुहोस कसरी धनि बन्ने बारेमा छलफल गरौं : –
तपाई जीवनमा धनि बन्न चाहानुहुन्छ भने तपाई जहाँ जस्तो अबस्थामा हुनुहुन्छ त्यहिबाट आजै प्रण गर्नुहोस कि म धनि बनेरै छाड्छु । यस्तो प्रण गर्नुहोस कि तपाईलाई तपाईको अठोटले हरदम झस्काइ राखोस, धनि बन्नै पर्छ भनेर दिल र दिमागमा सम्झारहोस ।
जहाँ जस्तो अबस्थामा हुनुहुन्छ त्यहिबाट धनि बन्ने प्रण गर्नुहोस : हामी मध्ये धेरै यस्तो सोच्छौ – मसँग पैत्रृक सम्पति छैन, म कमाउन त सक्थे तर साथ दिने कोहि छैन, म रिण नै रिणले डुबेको छु, मेरो लगानि गर्ने केहि छैन, मेरो अझै समय छ बिस्तारै कमाउला आदि, आदि । तर तपाई जीवनमा धनि बन्न चाहानुहुन्छ भने तपाई जहाँ जस्तो अबस्थामा हुनुहुन्छ त्यहिबाट आजै प्रण गर्नुहोस कि म धनि बनेरै छाड्छु । यस्तो प्रण गर्नुहोस कि तपाईलाई तपाईको अठोटले हरदम झस्काइ राखोस, धनि बन्नै पर्छ भनेर दिल र दिमागमा सम्झारहोस । तपाईले यस्तो अठोट गर्नुभयो भने तपाईलाई धनि बन्नलाई जस्तो सुकै समस्या र अप्ठेरोले पनि छेक्न सक्दैन ।
आफ्नो लागि खर्च गर्नुहोस : अहिलेको दुनिया एकदमै खरो प्रतिस्पर्धाको जमना हो, त्यसैले तपाई जागिर गर्नुहोस या व्यापार, स्कुल खोल्नुहोस या होटल जहाँ पनि एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जहाँ जति ठुलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ कमाउने मौका पनि उत्तिकै धेरै हुन्छ, तर तपाई अब्बल हुन जरुरी हुन्छ । त्यसको लागि तपाईले आफ्नो सीप, क्षमता र सिर्जनशीलताको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यसर्थ तपाईले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको लागि कन्जुस्याई नगरि खर्च गर्नुहोस । आफ्नो सीप र क्षमताबृद्दिको लागि गरेको खर्च, खर्च नभएर नाफा कमाउन गरेको लगानि जस्तै हो ।
बचत गर्नुहोस वा कमाई अनुसारको खर्च गर्नुहोस : भनिन्छ कि घाँटि हेरि हाड निल्नु । वास्तबमा हामी मध्ये धेरै आफ्नो कमाई नहेरी खर्च गर्न तम्सिन्छौ र रिणको भड्खालोमा जाकिन्छौ । जताभावि खर्च गर्ने बानीले हामीलाई धेरै नोक्सान पुर्याएको हुन्छ तर यो कुरा हामीलाई त्यतिबेला थाहा हुन्छ जतिबेला ढिला भैसकेको हुन्छ । त्यसैले तपाईले जति कमाउनु हुन्छ त्यहि अनुपातमा आजै बचत गर्न सिक्नुहोस र आफ्नो कमाई अनुसारको मात्र खर्च गर्ने बानि बसाल्नुहोस । कमाउनु भन्दा बचत गर्नु महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नुहोस ।
योजना ठुलो बनाउनुहोस तर काम सानोबाटै सुरु गर्नुहोस : हामी मध्ये धेरै यस्तो छौं कि हामीलाई रातारात धनि हुनु छ । यसको लागि हामी हुने नहुने कुराको ख्याल नै नगरि ठुला – ठुला योजना बनाउछौ । जानि नजानि, सकिनसकि एकै पटकमा एकै दिन, हप्ता र महिनामा पुरा गर्न खोज्छौ, आफुसँग भएको सारा सम्पति डुबाउछौ र काम नहुने भएपछि डिप्रशनको सिकार भएर बस्छौं । हामीले सबै कुरा रातारात गर्न खोजेर ठुल्ठुला कुरामात्र ताक्दा सानातिना कुरा त्यतिकै भुल्छौं तर त्यहि सानातिना पिन, नट र काँटि नभइ रेलगाडि चल्दैन भन्ने कुरा बिर्सन्छौं । त्यसैले जीवनमा लक्ष्य ठुलो बनाउनुहोस तर काम सानैबाट सुरु गर्नुहोस । तपाईलाई ठुल्ठुला सपिङ सेन्टर र मलमा ब्यापार गर्न फुटपाथमा माल बेचेको पनि ज्ञान हुन जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस ।
समय र प्रविधिलाई बुझ्नुहोस : धन कमाउनलाई एउटा सर्तमा निक्कै सजिलो छ – त्यो हो समय र प्रबिधि र मानिसका आवस्यकतालाई बुझ्नु । यदि तपाईले यि कुरालाई बुझ्न सक्नुभयो भने तपाई चाडै र सजिलै धनि बन्न सक्नुहुन्छ, जस्तै : मार्क जुगरबर्ग र बिल गेट्स लगायत थुप्रै यसका उदाहरण हुन् । यिनिहरुले धनि हुन लगानि, बचत र कडा मेहनतभन्दा ज्यादा मानिस र समयको आबस्यकता बुझे र त्यसलाई प्रबिधिमा जोडिदिए । त्यसले तपाईले पनि समय र मानिसको आबस्यकतालाई बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
लिनमात्र होइन दिन पनि जान्नुहोस : मानिसहरुलाई लाग्छ धनि हुनलाई जसरी हुन्छ लिन जान्नु पर्छ । तर अहिको आधुनिक युगमा यो कुरा पूर्णतया गतल हुन्छ । यदि तपाईले कसैबाट लिनमात्र खोज्नुभयो र दिन केहि चाहानु भएन भने तपाईको धनि बन्ने सपनामाथि त्यहि मान्छे बाधक बनेर आउछ । अर्को कुरा विज्ञानले पनि यहि प्रमाणित गरेको छ कि तपाईल लिनुभन्दा पहिले दिन जान्नु पर्छ । यदि तपाईले स्वास फेर्नु भएन भने स्वस्थ हावा पनि लिन सक्नु हुन्न । न त ट्वालेटमा पेट सफा नगरि ब्रेकफास्ट नै गर्न सक्नुहुन्छ ।
जोखिम मोल्न सिक्नुहोस : यदि तपाई धनि बन्न चाहानुहुन्छ र व्यापार गरिरहनु भएको छ भने कुनै काममा हुने वा नहुने चान्स बरावर छ भने तपाईले त्यस्तो अवस्थामा जोखिम मोल्न सक्नु पर्छ र जोखिमलाई अबसरमा बदल्न सक्नुपर्छ । यहि तपाई जोखिम मोल्न डराउनु भयो वा समस्याबाट भाग्नु भयो भने तपाईले कहिल्यै पनि ठुल्ठुला अबसरको मौका पाउनु हुन्न । यहाँ जोखिम भनेर अँध्यारोमा झटारो हान्नुलाई भन्न खोजेको होइन । तपाईले जोखिम मोल्दा पनि सोचबिचार गरेर सकिन्छ भने बिकल्प राखेर जोखिमको सामना गर्नु पर्छ ।
← बाबुराम र वैद्यको कुरा मिल्यो, प्रचण्डलाई पाखा लगाउने सपना पैसा के हो ? सबैले थाहा पाउनै पर्ने टप १० विश्व प्रसिद्ध भनाईहरु →